Tokony ho masina tahaka an'i Kristy isika
"(...) Ho masina hianareo, satria masina Aho" - 1 Pet. 1:16.
Amin'ny herintsika voafetra dia tokony ho masina isika ao amin'ny tontolo misy antsika, tahaka an'Andriamanitra izay masina ao amin'ny tontolo misy Azy. — RH, 01 Novambra 1892
Asain'Andriamanitra manorina toetra araka ny Môdely napetraka teo anoloantsika isika. Mila mametraka biriky ambonin'ny biriky isika, manampy fahasoavana amin'ny fahasoavana, mizaha izay fahalemena eo amintsika ka hanitsy izany araka ny torolalana nomena. Rehefa misy triatra eo amin'ny rindrin'ny trano lehibe iray, dia fantatsika fa misy tsy mety amin'izany rafi-trano izany. Hita eo amin'ny fanorenan-toetsika koa matetika ny tsy fahalavorariana. Raha tsy amboarina ireny triatra ireny, dia hirodana ny trano rehefa tonga hipaoka izany ny tafio-drivotry ny fizahan-toetra.
Nomen'Andriamanitra antsika ny hery sy ny fahaiza-mandinika, ary ny fotoana mba hanorenantsika toetra izay azony hasiana ny tombokasen'ny fanekeny. Iriny raha ny zanany tsirairay avy no hanorina toetra mendrika amin'ny alalan'ny fanaovana asa madio sy mendrika, ka amin'ny farany dia haneho rafitra mifandanja toerana Izy, dia tempoly tsara tarehy, homen'ny olona sy homen'Andriamanitra voninahitra.
Tsy maintsy manorina ny toetsika eo amin'i Kristy isika. Izy no hany fototra azo antoka, dia fototra tsy azon'iza na iza hozongozonina. Tsy ho vitan'ny tafio-drivotry ny fakam-panahy sy ny fizahan-toetra ny manetsika ny trano miorina mafy eo ambonin'ny Vatolampy Mandrakizay. Izay maniry hitombo ka ho tonga trano tsara tarehy ho an'ny Tompo dia tsy maintsy mikolokolo ny fahaiza-manaony rehetra. Amin'ny fampiasana ny talenta araka ny ilana izany ihany no hitomboan'ny toetra amim-pirindrana tsara. Araka izany dia entintsika eo amin'izany fototra izany izay voalazan'ny Tenin'Andriamanitra ho volamena, volafotsy, vatosoa, dia akora mahazaka ny fizahan-toetra amin'ny afon'Andriamanitra manadio. — CG, 165,166.
Ny fahamasinana (...) dia fametrahana ny sitrapo hofehezin'Andriamanitra tanteraka. Fiainana ny teny rehetra aloaky ny vavan'Andriamanitra izany, fanaovana ny sitrapon'ilay Raintsika ao an-danitra, fitokiana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fitsapana, na ao amin'ny haizina izany na ao amin'ny mazava. Fandehanana amin'ny finoana izany fa tsy amin'ny fahitana: fitokiana amin'Andriamanitra amin'ny fitokiana tsy misy fepetra, ary fitsaharana no amin'ny fitiavany. — AA, 51.